AHOANA NY FOMBA AHAFAHANA MAMPIASA WEBGL AO AMIN'NY FIREFOX - MOZILLA FIREFOX - 2019
Ahoana no ahafahana mampiasa Internet ao amin'ny tranokalan'ny Mozilla Firefox
Ny MS Word dia mamorona rohy active (hyperlinks) rehefa manoratra na mametaka adiresy URL ary manindry ny fanalahidy iray. "Space" (space) na "Enter". Ankoatr'izany, ny fanaovana rohy mavitrika amin'ny Teny dia azo tanterahana amin'ny tanana, izay horesahina ao amin'ny lahatsoratra.
Mamorona rindrankajy manokana
1. Fanteno ny lahatsoratra na ny sary tokony ho rohy mavitrika (hyperlink).
2. Mandehana any amin'ny takelaka "Insert" ary mifidiana ny baiko any "Rohibe"any amin'ny vondrona iray "Links".
3. Ataovy ao anatin'ilay boaty misy alohan'ny talanao ny asa ilaina:
Raha te-hamorona rohy mankany amin'ny tahiry na loharanon-tserasera ianao dia fidio ao amin'ny fizarana "Rohy mankany amin'ny" teboka "Fichier, pejy web". Ao amin'ny saha izay miseho "Address" midira ny URL (ohatra, //lumpics.ru/).
Filan-kevitra: Raha mifandray amin'ny rakitra iray izay tsy fantatrao ny adiresy (lalana) dia tsindrio fotsiny ny zana-tsipika ao amin'ny lisitra "Search in" ary mandehana any amin'ny rakitra.
Raha te hampiditra rohy mankany amin'ny rakitra iray mbola tsy noforonina ianao, dia fidio ao amin'ny fizarana "Rohy mankany amin'ny" teboka "Taratasy vaovao", dia alao ny anaran'ny rakitra amin'ny ho avy amin'ny sehatra mifanaraka amin'izany. Ao amin'ny fizarana "Rahoviana ny fanitsiana ny rakitra vaovao" mifidiana ny mari-pamantarana ilaina "Ankehitriny" na "Taty aoriana".
Filan-kevitra: Ankoatra ny famoronana ilay rohy dia afaka manova ilay fikandrana izay miseho rehefa manamboatra teny, fehezanteny, na sary misy ny rohy mavitrika.
Mba hanaovana izany, tsindrio "Soso-kevitra"ary ampidiro ny fampahalalana ilaina. Raha toa ka tsy atao ny manitsy, dia ny lalana mankany amin'ny rakitra na ny adiresy dia ampiasaina ho toy izany.
Mamoròna rohy mankany amin'ny mailaka mailaka.
1. Fanteno ny sary na ny lahatsoratra izay kasainao hovana amin'ny rohibe iray.
2. Mandehana any amin'ny takelaka "Insert" ary mifidiana ny baiko ao "Rohibe" (vondrona "Links").
3. Ao amin'ny boaty misy ala izay miseho eo anoloanao, ao amin'ny fizarana "Rohy mankany amin'ny" mifidiana singa "E-mail".
4. Ampidiro ny adiresy mailaka ilaina eo amin'ny sehatra mifanaraka amin'izany. Azonao atao ihany koa ny mifidy ny adiresy avy amin'ny lisitry ny fampiasana vao haingana.
5. Raha ilaina dia tanisao ilay foto-kevitra ao amin'ny sehatra mifanaraka amin'izany.
Fanamarihana: Ny navigateur sy ny mailaka sasany dia tsy mahafantatra ny laharam-pandaharana.
Filan-kevitra: Tahaka ny azonao atao ny mamolavola ny totozy ho an'ny rindrankajy ara-dalàna, dia azonao atao koa ny mametraka ny rakitra ho an'ny rohy amin'ny mailaka. Mba hanaovana izany, tsindrio fotsiny ilay bokotra. "Soso-kevitra" ary ampidiro ao amin'ny sora-tananao ny lahatsoratra takiana.
Raha tsy miditra amin'ny lahatsoratra amin'ny tooltip ianao dia hiseho ny MS Word "Mailto", ary aorian'ity lahatsoratra ity dia hahita ny adiresy mailaka napetrakao sy ny foto-kevitry ny mailaka.
Ankoatra izany, afaka mamorona rohan-tserasera amin'ny alalan'ny mailaka ianao amin'ny alàlan'ny fanoratana ny adiresy mailaka ao amin'ilay rakitra. Ohatra, raha miditra ianao "[email protected]" tsy misy teny filamatra sy fanontam-pirinty na "Enter", dia misy rohy ahitana rindran-drakitra misimisy avy hatrany.
Mamoròna rohy mankany amin'ny toerana iray hafa ao amin'ilay rakitra
Mba hamoronana rohy mavitrika amin'ny toerana manokana ao anaty rakitra iray na ao amin'ny pejin'ny tranonkala noforonina ao amin'ny Word ianao, dia mila manamarika ny teboka misy ity rohy ity.
Ahoana no hanamarihana ny toerana misy ny rohy?
Amin'ny fampiasana tsoratadidy na lohateny dia azonao atao ny manamarika ny toerana misy ny rohy.
1. Fantenao zavatra na lahatsoratra izay tianao hampidira tsoratadidy, na tsindrio ny bokotra havia eo amin'ny toerana misy ilay taratasy izay tianao hampidirana azy.
2. Mandehana any amin'ny takelaka "Insert"tsindrio ny bokotra "Bookmark"any amin'ny vondrona iray "Links".
3. Ampidiro ny anaran'ny tsoratadidy ao amin'ny faritra mifanaraka amin'izany.
Fanamarihana: Ny anaran'ny tsoratadidy dia tokony hanomboka amin'ny taratasy. Na izany aza, ny anaran'ny tsoratadidy dia mety ahitana tarehimarika, fa tsy tokony hisy toerana.
Filan-kevitra: Raha mila manazava ny teny ao amin'ny anaran'ny tsoratadidy ianao dia ampiasao ny toetra mampiavaka azy, ohatra, "Sayt_lumpics".
4. Rehefa vita ny dingana etsy ambony dia tsindrio "Add".
Ampiasao ny fomba fanoratana
Azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo karazan-dahatsoratra nosoratana ao amin'ny Word MS mankany amin'ny lahatsoratra eo amin'ny toerana izay tokony hitarika ny rohibe.
1. Mifidiana andalan-tsoratra iray izay tianao hampiharina fomba fanao manokana.
2. Ao amin'ny tab "Home" Safidio ny iray amin'ireo endri-tsoratra hita ao amin'ny tarika "Styles".
Filan-kevitra: Raha mifidy andinin-tsoratra izay tokony ho toy ny lohateny lehibe ianao, dia azonao atao ny mifidy ny modely mifanaraka aminy amin'ny alalan'ny fanangonana fomba fanehoana maimaim-poana. Ohatra "Lohateny 1".
1. Fantenao ny takelaka na ny zavatra izay hiantefa amin'ny rohibe.
2. Tsindrio eo ankavanana amin'io singa io, ary ao amin'ny menu context izay misokatra, mifidiana "Rohibe".
3. Fanteno ao amin'ny fizarana "Rohy mankany amin'ny" teboka "Apetraho ao anatin'ilay antontan-taratasy".
4. Ao amin'ny lisitra miseho, dia fidio ny tsoratadidy na lohateny izay hampifandraisana ny rohibe.
Filan-kevitra: Raha tianao ny manova ny soso-kevitra izay aseho rehefa miseho amin'ny rohibe ianao dia tsindrio "Soso-kevitra" ary midira ny lahatsoratra takiana.
Raha toa ka tsy atao ny manitsy ny bitsika, dia ampiasaina ilay rohy tafiditra amin'ny tsoratadidy "anaran'ny tsoratadidy ", ary ny rohy mankany amin'ny lohateny "Current Document".
Mamoròna rohy mankany amin'ny toerana iray ao amin'ny rakitra iray na pejy noforonina noforonina
Raha te hamorona rohy mavitrika amin'ny toerana manokana ao anaty rakitra an-tsoratra na tranonkala iray noforonina anao amin'ny Word ianao, dia mila manamarika ny teboka misy ity rohy ity.
Mariho ny toerana misy ny rohibe
1. Ampio tsoratadidy ao amin'ny rakitra an-tsoratra farany na pejin-tranonkala noforonina amin'ny fampiasana ilay fomba fiasa voalaza etsy ambony. Afeno ny rakitra.
2. Sokafy ny antontan-taratasy izay tokony hametrahana ilay rohy mavitrika amin'ny toerana manokana amin'ilay rakitsary efa nisokatra.
3. Fanteno ny totozy tokony ho hita amin'ity rohibe ity.
4. Tsindrio ny bokotra havanana amin'ny zavatra voafantina ary mifidiana ny singa ao amin'ny menu context "Rohibe".
5. Mifidiana eo amin'ny varavarankely izay ao amin'ny tarika "Rohy mankany amin'ny" teboka "Fichier, pejy web".
6. Ao amin'ny fizarana "Search in" ampitahao ny lalana mankany amin'ny rakitra izay namoronanao ny tsoratadidy.
7. Tsindrio ilay bokotra. "Bookmark" ary tsindrio ny tsoratadidy takiana ao amin'ny boaty fifanakalozan-kevitra, ary tsindrio "OK".
8. Tsindrio "OK" ao amin'ny boaty dialogue "Ampidino rohy".
Ao amin'ny rakitrao noforoninao, hisy rohibe hiseho eo amin'ny toerana hafa ao anaty rakitra iray na amin'ny pejy web. Ny soso-kevitra izay aseho amin'ny default dia ny làlana mankany amin'ny rakitra voalohany misy ny tsoratadidy.
Efa nanoratra momba ny fomba hanovana ny soso-kevitra momba ny rohy izahay.
1. Mifidiana sora-piraiketana na zavatra iray izay hiankina amin'ny rohibe iray ao anaty rakitra iray.
2. Tsindrio eo amin'ny bokotra ankavanana ary sokafy ny singa ao amin'ny sehatry ny fifanakalozan-kevitra misokatra "Rohibe".
3. Ao amin'ny boaty fanokafana izay misokatra, ao amin'ny fizarana "Rohy mankany amin'ny" mifidiana singa "Apetraho ao anatin'ilay antontan-taratasy".
4. Misafidiana tsoratadidy na lohateniny ao amin'ny lisitra miseho izay hiantsoana ny rohy mavitrika.
Raha mila manova ny soso-kevitra izay miseho rehefa mitsofoka amin'ny rindrankajy pointer ianao dia ampiasao ny toromarika voatondro ao amin'ny fizarana teo aloha.
Filan-kevitra: Ao amin'ny doka Microsoft Office Word, azonao atao ny mamorona rohy mavitrika amin'ny toerana voafaritra amin'ny rakitra noforonina ao amin'ny programa hafa an'ny birao. Ireo rohy ireo dia azo avotana ao amin'ny format Excel sy PowerPoint.
Noho izany, raha te-hamorona rohy mankany amin'ny toerana iray ao amin'ny workbook MS Excel ianao, dia mamoròna aloha ny anaranao, avy eo amin'ny rohibe amin'ny faran'ny anaran'ny rakitra, karazana “#” raha tsy misy quotes, ary ao ambadiky ny baoritra, dia lazao ny anaran'ny rakitra XLS noforoninao.
Ho an'ny rohibe amin'ny PowerPoint, ataovy mitovy ny zavatra iray, raha tsy aorian'ny famantarana “#” ampitahao ny isa ny fitaratra iray manokana.
Alefaso haingana ny rohy mankany amin'ny rakitra hafa
Mba haingana haingana mamorona rohibe, anisan'izany ny fampidirana rohy mankany amin'ny vohikala iray amin'ny teny, dia tsy ilaina ny manatona ny boaty "Fidio ny rohibe", izay voalaza ao amin'ny fizarana rehetra teo aloha.
Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny asa fanodinana sy daka, izany hoe, raha toa ka misisika sy mamoy ny lahatsoratra voafaritra na singa fototra avy amin'ny rakitra MS Word, URL iray na rohy mavitrika avy amin'ny tranonkala sasany.
Ankoatr'izay, afaka maka tsotra fotsiny ny sela efa voafaritra ianao na ny isan'ireo izay avy amin'ny tahiry Microsoft Office Excel.
Azonao atao, ohatra, ny mamorona rindrankajy amin'ny famaritana amin'ny antsipiriany izay misy ao anaty rakitra hafa. Azonao jerena ihany koa ny vaovao nalefa tao amin'ny pejin-tranonkala iray manokana.
Fanamarihana manan-danja: Tokony havotana avy amin'ilay rakitra voarakitra teo aloha ny lahatsoratra.
Fanamarihana: Tsy azo atao ny mamorona rohy mavitrika amin'ny fanodinana sary (ohatra, endrika). Raha hametraka rohibe ho an'ireny singa mampiavaka azy ireny ianao, dia fidio ilay sary fanangonana, tsindrio ny bokotra havanana ary mifidiana ao amin'ny menu context "Rohibe".
Mamoròna rohibe iray amin'ny fanindrona votoaty avy amin'ny antontan-taratasy fanalahidy iray.
1. Ampiasao ho antontan-taratasy farany ny rakitra izay tianao hananganana rohy mavitrika. Alefaso mialoha izany.
2. Sokafy ny rakitra MS Word izay tianao ampidirina rohibe.
3. Sokafy ny tahirin-kevitra farany ary fidio ny sombin-tsoratra, sary na zavatra hafa izay hitarika ny rohy.
Filan-kevitra: Azonao atao ny manasongadina ny teny vitsivitsy voalohany amin'ny sehatra izay hamoronana rohy mavitrika.
4. Tsindrio ny bokotra ankavanana amin'ny totozy voafantina, alenteho ao amin'ny takelaka fikandrana, ary avy eo manisika ny rakitra Word izay tianao ampidirina rindrankajy.
5. Mifidiana ao amin'ny sakafo mifandraika izay miseho eo anoloanao "Mamorona rohibe".
6. Ny sombin-tsoratra voafidy, sary na zavatra hafa dia ho lasa rohibe ary hanondro ny rakitra farany noforoninao teo aloha.
Filan-kevitra: Rehefa asehonao ny cursor amin'ny rohibe noforonina, dia ny endritsoratra amin'ny doka farany dia aseho amin'ny endrika default. Raha toa ka mitsiditsindry amin'ny rohibe iray ianao, alohan'ny hitazonana ny "Ctrl" fanalahidy, dia handeha ho any amin'ilay toerana ianao ao amin'ny rakitra farany izay manondro ny rohy.
Mamoròna rohy mankany amin'ny votoatin'ny tranonkala iray amin'ny alalan'ny fisarihana azy.
1. Sokafy rakitra an-tsoratra izay tianao hampidirana rohy mavitrika.
2. Sokafy ny pejin-tranonkala ary tsindrio ny bokotra havanana amin'ny zavatra efa voafantina izay tokony hitarika ny rohy.
3. Ampidiro ankehitriny ny sivana voafantina ao amin'ny fikandrana, ary avelao hijery ilay rakitra izay tianao hampidirana rohy aminy.
4. Afao ny bokotra ankavanana rehefa ao anaty rakitra, ary ao amin'ny menu context izay misokatra, mifidiana "Mamorona rohy". Misy rohy mavitrika amin'ny tontolon'ny pejy web ao amin'ny rakitra.
Kitiho ny rohy miaraka amin'ny fanalahidy efa natonta "Ctrl", dia hiditra mivantana amin'ilay zavatra nofidina ianao ao amin'ny fikandrana.
Mamoròna rohibe ho an'ny votoatin'ny pejy Excel amin'ny alàlan'ny kopia sy fametahana
1. Sokafy ny rakitra MS Excel ary alimino ao aminy ny sela na ny karazan-tsipika izay apetan'ilay rohy.
2. Tsindrio eo amin'ilay sombina voafantina amin'ny bokotra ankavanana ary mifidiana ny singa ao amin'ny menu context "Copy".
3. Sokafy ny rakitra MS Word izay tianao ampidirina rohibe.
4. Ao amin'ny tab "Home" in a group "Hela-tsilaka" tsindrio ny zana-tsipìka "Insert"ary avy eo dia ao amin'ny menio fanala "Ampidino amin'ny rohibe".
Ny rohy mankany amin'ny rakitra ao amin'ny rakitra Microsoft Excel dia hanampy amin'ny Teny.
Izay ihany, amin'izao fotoana izao dia fantatrao ny fomba hanaovana rohy mavitrika amin'ny rakitra MS Word ary mahafantatra ny fomba hanampiana ireo rohy isan-karazany amin'ny karazana votoaty samihafa. Maniry hahazo asa mahomby isika ary mahomby amin'ny fianarana. Fahombiazana amin'ny fandresena ny Microsoft Word.